पत्रकारले नै ८५ वर्षीय आमालाई ५ वर्षदेखि कु’ट’पि’ट गर्दै आएको भयो खुलासा, अन्ततः आमा गु’हा’र माग्दै आईन् मिडियामा « Etajakhabar
पत्रकारले नै ८५ वर्षीय आमालाई ५ वर्षदेखि कु’ट’पि’ट गर्दै आएको भयो खुलासा, अन्ततः आमा गु’हा’र माग्दै आईन् मिडियामा
प्रकाशित मिति : ३० आश्विन २०७७, शुक्रबार १३:०३
किर्तीपुर । आफ्नै सन्तानबाट कु’टाई खाने आमा ती संसारमै बिरलै हुन्छन् । र जो हुन्छन् ती साह्रै अभागी पनि हुन्छन् । बुढेसकालमा छोरा बुहारीबाट माया, सम्मान र स्याहासुसार पाईएला भन्ने आशा हरेक बाबुआमाको हुन्छ । तर त्यही बुढेसकालमा आफैले जन्माएको सन्तानबाट दिनहुँ कु’टा’ई खान परिरहन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा ती बाबआमालाई कस्तो हुन्छ होला ?
यो कुराको आभाष भोग्नेले मात्र हैन देख्ने, सुन्ने र जान्ने बुझ्ने सबैले सजिलै अनुमान गर्न सक्ने कुरा हो । यस्तै एउटा घटना घटेको छ किर्तीपुरमा । आफैले जन्माएको छोरा र बुहारीको हातबाट प्राय सानो सानो कुरामा पनि कु’टाई खाई रहने एउटी अभागी आमा छिन् किर्तीपुरमा ।
उनी जगतमाया श्रेष्ठ हुन् । उमेरले ८५ वर्ष लागेकी जगतमायाको भनाई अुनसार उनका छोराले उनलाई दिनदिनै जसो कु’टि’रहेका हुन्छन् रे । छोराले मात्र नभई छोरासंग बुहारीले पनि उनलाई हा’त’पा’त गर्ने गर्छिन् रे । जगतमायाले रुँदै सुनाईन् आफ्ना पि’डा‘मैले केही गल्ती नै गरेकी हँदिन तर पनि खै किन मलाई कु’ट्छन् । गाली गर्छन् । म एक्लै बस्नै सक्दिन । मलाई मेरो छोरा बुहारीदेखि ड’र लागेर आउँछ ।’
उनको यो कुरा सुनेर कस्को मन नदुख्ला र ? दुई वटा छोराकी आमा हुन् जगतमाया । छोरा नहुनेलाई छोराको कत्रो रहर हुन्छ । तर जगतमायाको त दुईदुई वटा छोरा हुँदा पनि उनी दुःखी छिन् । उनी अपुताली जस्तै भएकी छिन् । कान्छो छोरा १ वर्षको नहुँदै श्रीमान बितेका रहेछन् जगतमायाको । त्यो बेलादेखि खाएको नखाई गरि उनले छोराहरुको पालन पोषण गरेको बताईन् । श्रीमान बिना आफ्ना छोराहरुलाई हुर्काउँदा निकै कष्ट सहनु परेको कुरा सम्झंदै भक्कानीन् जगतमाया ।
तिनै छोरा बुहारीले आफुलाई कु’ट्दै आएको ५ वर्ष भएको बताउँछिन् जगतमाया । उनले भनिन्,‘छोरोभन्दा बुहारीले मलाई धेरै पिट्छ । छोराले चैं कति कराको भनेर मेरो पाखुरा समातेर खाटमा पछार्छ । अनि कहिलेकाहीँ मलाई मेरो दुईवटा कुममा समातेर धकेल्छ पनि ।’ जगतमायाले यी कुरा सुनाई रहँदा उनको स्वर काँपी रहेको थियो । उनी निकै पिडामा रोईरहेकी थिईन् ।
विगत ५ वर्षदेखि छोरा बुहारीबाट घरेलु हिं’सा सहँदै आएकी जगतमायाले हिजो मात्रै पनि कु’टा’ई खाएकी रहिछन् । छोराले आफुलाई धकेलेर खाटमा पच्छारीदिंदा पाखुरामा लागेको चोट देखाउँदै जगतमायाले भनिन्‘यी यहाँ निरको यो निलो डाम मलाई मेरो छोराले हिजो खाटमा पर्छादाको हो । यो साह्रै दुखेको छ मलाई ।’ जगतमायालाई आफ्नै छोराबुहारीले गरेको तयो अमानवीय व्यवहारको वि’रो’ध उनका छिमेकीहरुले पनि गरेका छन् ।
आफ्नै आमालाई हा’त’पा’त गर्ने ती छोरा रनेन्द्र बहादुर श्रेष्ठ र बुहारी सुलोचना हुन् । अचम्मको कुरा त के छ भने जगतमायालाई बुहारीले कु’ट्दा पनि केही नभन्ने र उल्टै आफैले आफ्नी आमालाई हा’त’पा’त गर्ने ती छोरा पत्रकार हुन् रे । तपाईँको छोराले के गर्छन् भनेर सोधेको प्रश्नमा जगतमायाले ‘पत्रकार’ गर्छ भन्ने जवाफ दिएकी थिईन् ।
उनको कुराबाट यो त प्रष्ट भयो कि आमालाई कुट्ने त्यो छोरा पत्रकार रहेछ । तर कुन मिडियामा काम गर्छ त्यो भने थाहा हुन सकेन । यो घटनाले अहिले सामाजिक सञ्जालमा आमा कुट्ने छोरा रनेन्द्र र बुहारी सुलोचनाको निकै नै वि’रो’ध भईरहेको छ । यस्तो सन्तान हुन भन्दा त नभएकै बेस भनेर सबैले ती छोराबुहारीलाई गाली गरिरहेका छन् ।
वर्षौंदेखि छोराबुहारीको अ’त्या’चार सहंदै आएकी जगतमायाको सहन सक्ने शक्ति टुटेपछि अन्ततः उनी मिडियामा आएकी छन् । छोराबुहारीको अ’त्या’चारबाट छुटकारा पाएर न्याय पाउने आशामा गु’हा’र मागेकी हुन् जगतमायाले ।